Ezikadoti eMsunduzi zihloniphe abesifazane ngokudlubha amalokwe emsebenzini – Sivubela intuthuko Newspaper
Ezikadoti eMsunduzi zihloniphe abesifazane ngokudlubha amalokwe emsebenzini
NGEZINYE zezisebenzi zesilisa zaseMsunduzi eziqoqa udoti ebezidlubhe amalokwe.
ZITHATHWE njengamaqhawe izisebenzi zesilisa zikaMasipala waseMsunduzi ngokudlubha amalokwe zisemsebenzini wokuqoqa udoti zihlonipha ozakwabo besifazane eziyibambe nabo njengoba iNingizimu Afrika beyibungaza usuku lwabesifazane oluba njalo mhlaka 9 ku-August minyaka yonke oselwahlonzwa njengolusemthethweni ngokwekhalenda laseNingizimu Afrika.
Wonke amehlo abephenduka nalezi sebenzi ngoMsombuluko ebezibonakala zilenge emalolini zishaya amakhwelo kubonakala ukuthi injabulo iyachichima kuzona. ISIVUBELA INTUTHUKO ebikhona edolobheni laseMgungundlovu izibonele lezi zisebenzi ebeziselolini ebelehla ngoLangalibalele Street (Longmarket) ebezimata zenza umsebenzi wazo wansuku zonke wokuqoqa udoti. Obekuqapheleka kulezi sebenzi nobekuthatha amehlo abantu yijubane ebeliqhuma kuzona uma zehla elolini lokho obekwenza ukuthi umuntu agxile kuzona ngoba kakujwayelekile ukubona umuntu wesifazane egijima ngejubane eliphezulu. Nokho uma sezisondela eduzane bekubonakala ukuthi ngezesilisa kodwa zigqoke amalokwe. Abantu abebesedolobheni bebengazibekile phansi njengoba babekuthakasela abebekubona bethatha izithombe bephindelela nazo lezi zisebenzi zingakhombisi ukuba nenkinga njengoba bezize zidanse uma zibona zithathwa izithombe.
Okhulumela uMasipala waseMsunduzi uNkk Thobeka Mafumbatha uthe bengumasipala bakujabulele ukubona izisebenzi zabo zesilisa ikakhulukazi lezi eziqoqa udoti zivolontiya ngokwazo zihlonipha ozakwabo eziyibambe nabo kwa-Waste Department ngokuthi nazo zingene ezicathulweni zazo zidlubhe amalokwe njengabo besifazane. Uthe umsebenzi wokuqoqa nokuthutha imfucuza ubucayi ngakho kunikezana ithemba ukubona izisebenzi zisekana emsebenzini wazo. Uthe lokhu obekwenziwa yizisebenzi kukhombisa ukuthi bayaziqonda izinselelo ezibhekana nozakwabo emsebenzini wabo. “Siyazi ukuthi kulezi zinto ezilahlwayo kukhona neziyingozi kakhulu kodwa ukubona izisebenzi zesilisa zijabule ngaleya ndlela lokho kuyakhuthaza. Nezabesifazane ziyakhuthazeka uma zibona zesekwa ngozakwabo. Nomphakathi uba nethemba uma ubona izisebenzi zikhombisa ukubanomdlandla ngomsebenzi wazo njengoba bekwenza lezi zesilisa kade zidlubhe amalokwe,” kusho uNkk Mafumbatha.
UMsunduzi namaloli amasha ophiko lwezenhlanzeko nemfucuza